Jwxo-shiil: Cidii I Cayda Degmadeena Adeer ha Cayminina! – Rasaasa News
Feb 15, 2012 ethiopia, Jwxo-shiil: Cidii I Cayda Degmadeena Adeer ha Cayminina!, Somali
Dhagaxbuur, Feb 15, 2012 [ras] – Labo ka mid ah oday dhaqameedyada degmada Gunagado, kana mid ahaa dadkii ka qayb galay shirkii Gunagado ee socdaalkii “UBO Quusis” ayaa shalay oo bisha February ahay 13, 2012 lagu toogtay badhtanka magaalada Gunagado.
Labadan marxuun ee lagu dilay ayaa ahaa oday dhaqameedyada magaalada Gunagado, caan ka ahaa degaanka Somalida Ethiopia. labadan oday ayaa magacyadooda la kala odhan jiray.
1. Macalin Khadar
2. Xaaji Cabdiqaadir Guuleed (Fooloow).
Madaxweynaha degaanka Somalida Ethiopia Cabdi, ayaa socdaal loogu magacdaray “UBO Quusis” ku maray qaar ka mid ah degmooyin iyo tuulooyin degaanka Somalida Ethiopia.
Dilka odayadan ayaa loo sababaynayaa socdaalkii Madaxweynaha dawlada degaanka Somalida Ethiopia uu dhawaan ku tagay degamada Gunagado.
Madaxweynaha ayaa intii uu socdaalka ku jiray, ku qabanayey shirar degmooyinka iyo tuulooyinka uu marayey ee degaanka. Dadka ka qayb galayey shirarka ayaa sabab keentayba waxay aad ugu caraatamayey Jwxo-shiil.
Hadaba, sida aan ka soo xiganay dad ka qayb galay shirkii waan jiraa ee Jwxo-shiil ku qabtay London, 29/01/2012, ayaa hadalkiisii waxaa ka mid ahaa “kuwa caraatamaya way eedi doonaan.” ayuu yidhi isaga oo cadhaysan.
Degaanka shalay dilku ka dhacay waa degamo khaas u ah jinfada Jwxo-shiil, shakina kuma jiro in uu isagu amray dilka odayda, ceebna kuma ah Jwxo-shiil in uu labadiisa gacmood mid gooyey.
Dadka dilay odayadu waa dad ka mid ah degmada Gunagado oo la jinfo ah odayada. Waxaa isweydiin leh kuwa adeerkood dilay waa kuwa sideed, waa kuwa la mid ah Jwxo-shiil, oo aan kala garanayn wanaag iyo xumaan. Waxayna la mid tahay qisadii “midigeey bixid daa.”
Waxaa iyaduna isweydiin leh, hadii ayna dawlada degaanka Somalida Ethiopia iyo ciidamadeedu difaaci karin shacabka, maxay shirarka dilku dabo socdo ugu qabtaan shacabka? Jawaabta degaanka Somalidu waa nin walaalkii dilaya yaa ka ilaalin karaa? waa ma jiro.
Waxaa xaqiiq ah in ayna kooxda Jwxo-shiil, gudaha degaanka Somalida Ethiopia maanta waxba ka fulin karin, in kasta oo ay dibadaha shirar ku qabtaan.
Jabka iyo jahawareerka haysta kooxda Jwxo-shiil waata maanta ku kaliftay Jwxo-shiil, in uu ku gurya noqdo aqalkiisa oo ah meesha kaliya ee uu waxyeeli karo, ka dib kolkii uu ka cadhooday erayga “hooyadaa was.”